Goob jooge “Inta badan Goobaha Ganacsiga waa ay xiran yihiin ciidamo beeleed hubeysan ayaan ku aragnaa Xaafadaha Bartamaha Magalada Baladweyne” – Radio Daljir
Agoosto 28, 2018 6:12 b 0
Xiisad ayaa ka taagan magaalada Beledwayne ee xarunta gobolka Hiiraan, kadib dil shalay gudaha magaaladaasi loogu gaystay dareewal kaxeeya gaadiidka nooca bajaajta loo yaqaano.
Askariga dilka gaystay ayaa ku jira xabsiga magaalada Baladwayne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo beesha uu kasoo jeedo ninka la dilay ay dalbanayaan in loo dilo gacan ku dhiig laha ayaa sababtay in la xiro qaybo ka mid ah magaalada.
“Inta badan Goobaha Ganacsiga waa ay xiran yihiin ciidamo beeleed hubeysan ayaan ku aragnaa Xaafadaha Bartamaha Magalada Baladweyne,wax dhaq dhaqaaq ah magalada kama jiraan ayuu yiri qof ka mid ah dadka Baladweyne.
Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilal aan sababtooda la sheegin, mana jirto wax cadaalad ah oo loo taago dadka gaysta.
Madaxwaynaha cusub ee Soomaali Galbeed : “Wuu mudanyahay Cabdi Iley in la xiro”